5 Caqabadood Oo Hor Yaalla Manchester United
HomeWararka Maanta5 Caqabadood Oo Hor Yaalla Manchester United
23/10/2017 Abdiwahab Ahmed
Bilowgii sida hillaaca ay u socotay Manchester United ee guulaha xidhiidhka ah ay deriska la noqotay ayaa waxa kala dhantaashay Huddersfield Sabtidii, taas oo laba gool iyo waxba ku niyad jebisay wiilasha Mourinho.
Guul-darradaasi waxay Manchester United ka dhigtay inay shan dhibcood ka hoosayso kooxda ay isku magaalada yihiin ee Man City oo hoggaanka haysa. Markii ay ciyaartu dhamaatay, Mourinho ayaa saxaafadda u sheegay in natiijada kulanka Huddersfield ay ahayd mid aad u xun, isla markaana waxa uu ku eedeeyey ciyaartoygiisa inaanay la imannin doonis ku aaddan guusha ciyaartaas.
Dadka qaar ayaa ku tilmaamay in qaabkii ay Manchester United u ciyaartay uu ahaa kii ugu liitay 15 bilood oo Mourinho uu tababare u ahaa, isla markaana ay xattaa ka liiteen markii ay ciyaaraha saaxiibtinimo ku ciyaarayeen Maraykanka.
Haddaba guul-darradaas iyo barbardhac ay la galeen Liverpool ayaa iskugu xigay, waxaase miiska u saaran Mourinho shan arrimood oo walaac ku haya, kuwaas oo xal u heliddoodu ay tubta guusha kusoo celin doonto Man United.
1. Dhibaatooyinka Dhaawaca:
Phil Jones ayaa ah ciyaartoygii ugu dambeeyey ee Manchester ka dhaawacma, waxaana la saaray qaybta hore ee kulankii Huddersfield ka hor intii aanay goolashu dhalanin. Markii uu baxayay waxa uu dareemayay xanuun, kaddibna waxa la saaray baska kooxda.
Sida khubarada ciyaaruhu saadaalinayaan, waxa uu Jones maqnaan doonaa muddo dheer.
Paul Pogba iyo Marouane Fellaini ayaa ah walaaca ugu weyn ee dhaawacyada, kuwaas oo aan weli la garanaynin inta ay maqnaan doonaan, isla markaana ahaa awooddii khadka dhexe oo ay kooxdi si aad ah u tebtay.
Intii uu maqnaa Pogba, Romelu Lukaku ayaa u muuqday inuu go’doon ku yahay afka hore, isla markaana aanay jirin ciyaartooyo si sahal ah kubadda ugu geyn kara halka uu joogo.
Nasiib wanaag, Mourinho waxa uu dib u helayaa Eric Bailly oo dhaawac garabka ah ku maqnaa, kaas oo la filayo inuu ciyaaro kulanka Tottenham.
2. Qaab-ciyaareedka Henrikh Mkhitaryan
Mourinho waxa uu afkiisa hore ee weerarka ku dhisay ciyaartooyo uu ka mid yahay Henrikh Mkhitaryan oo u dhashay waddannka Armenia, kaas oo ka ciyaara booska lambarka 10, si uu u caawiyo weeraryahanka lambarka 9. Waxa uu caawiyey shan gool saddexdiisii ciyaarood ee ugu horreeyey, waxaana uu barbarreeyey rikoodhkii u yaallay caawinta saddexda kulan ee ugu horreeya. Intaa wixii ka dambeeyey isbeddel ayaa ku dhacay.
Kulankii Champions League ay Manchester ugu tagtay Benfica, waxa uu Mkhitaryan fadhiyey kaydka, taas oo lagu sifeeyey in tababaruhu uu qaatay go’aan sax ah, maadaama uu ciyaaro xun soo bandhigay.
Inkasta oo uu leeyahay khibrad iyo tayo sare oo uu guul ugu horseedi karo Manchester, haddana waxa uu ka mid yaahy walaac haysta Mourinho.
3. Goolashii Wakhtiga hore oo istaagay
United, xili ciyaareedkii hore waxay ku dhibaatootay inay goolal ka dhaliso kooxaha difaacoodu fiican yahay, waxaana jilbaha u dhigay oo dhibco ka qaatay Burnley, Stoke, West Ham, Bournemouth iyo West Brom, kuwaas oo intay ugu yimaaddeen Old Trafford kala noqday farxad.
Xili ciyaareedkan, United si wanaagsan oo ka duwan xili ciyaareedkii hore ayay u ciyaartay, waxaana ay joogteysay goolal wakhti hore ay ka dhaliso kooxaha ka soo horjeeda, laakiin kulamadii u dambeeyey, way awoodi weyday inay goolal wakhti hore ah dhashaan.
4. Walaaca kulamada dibedda
Kulamada ay Manchester United u tagto kooxaha, waxay kala kulantaa dhibaato badan. Tan iyo markii ay goolasha badan ugu awood sheegatay Swansea oo ay ugu tagtay Liberty Stadium bishii August, United waxa ka badisay Southampton, waxaana barbar dhac la gashay Stoke iyo Liverpool halka Huddersfield ay ka badisay.
5. Guulaha City waxay ku yihiin niyad-jab
Guul-darradii kasoo gaadhay Huddersfield, waxay ahayd tii ugu horreysay ee Manchester ay la kulanto xili ciyaareedkan, waxaase ay ka reebtay Manchester City oo dhinaceeda dhulka la dhigi la’yahay, isla markaana shan dhibcood oo nadiif ah hoggaanka kula wareegtay.
Kulanka Sabtida waxay Manchester ku martigelin doontaa garoonkeeda Tottenham, kaddibna waxay u safri doontaa Stamford Bridge oo ay ku wada ciyaari doonaan Chelsea. Labadan kulan oo ay guuleysan waayaan wiilasha Mourinho, iyo City oo dhinaceeda sii wadda guushu, waxay qalbi jab ku noqonayaan Mourinho oo u muuqan doona inuu ka samray horyaalka oo uu City uga hadhayo.
Ronaldinho Oo Farriin Cusub U Diray Coutinho Iyo Halista Ay Ku Tahay Liverpool